User 01 – 24hourspress
Author: User 01
by User 01 February 25, 2022 February 25, 2022 0
ဂျင်းမဟုဘူးနော် တကယ်အဖမ်းခံရပြီ ~ ~ ~ ~ ဂျင်းမဟုဘူးနော် တကယ်အဖမ်းခံရပြီ ~ ~ ~ ~ VDO ဂျင်းမဟုဘူးနော် တကယ်အဖမ်းခံရပြီ ~ ~ ~ ~
ပြည်သူ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း ကျရှုံးပြိတဲ့ဗျ
by User 01 February 24, 2022 February 24, 2022 0
ပြည်သူ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း ကျရှုံးပြိတဲ့ဗျ ~ ~ ~ ~ ပြည်သူ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း ကျရှုံးပြိတဲ့ဗျ ~ ~ ~ ~ VDO ပြည်သူ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း ကျရှုံးပြိတဲ့ဗျ ~ ~ ~ ~
မင္းသမီး မယ္လိုဒီနဲ႔စစ္တပ္အရာ႐ွိဟိုတယ္မွာလုပ္တဲ့ဗီဒီယို ~ ~ ~ ~ မင္းသမီး မယ္လိုဒီနဲ႔စစ္တပ္အရာ႐ွိဟိုတယ္မွာလုပ္တဲ့ဗီဒီယို ~ ~ ~ ~ VDO မင္းသမီး မယ္လိုဒီနဲ႔စစ္တပ္အရာ႐ွိဟိုတယ္မွာလုပ္တဲ့ဗီဒီယို ~ ~ ~ ~
အလိုမတူဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ဟု ပခုကၠဴမွ ကာယကံရွင္ေျပာ
အလိုမတူဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ဟု ပခုကၠဴမွ ကာယကံရွင္ေျပာ ~ ~ ~ ~ အလိုမတူဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ဟု ပခုကၠဴမွ ကာယကံရွင္ေျပာ ~ ~ ~ ~ အလိုမတူဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ဟု ပခုကၠဴမွ ကာယကံရွင္ေျပာ ~ ~ …
ရေသူမဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း video ဖိုင်များစုစည်းမှု
~ ~ ~ ~ VDO ရေသူမဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း video ဖိုင်များစုစည်းမှု ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း နဲ႔ NUG ကိုသာ အေစာထဲက လက္ခံေပးလိုက္ရင္ ဒီလိုေတြျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး….
by User 01 February 23, 2022 February 23, 2022 0
~ ~ ~ ~ ဦးကျော်မိုးထွန်း နဲ့ NUG ကိုသာ အစောထဲက လက်ခံပေးလိုက်ရင် ဒီလိုတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး…. အစအဆုံးသေချာနားထောင်ကြည့် နေ့စဉ်သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေး နေလို့ Page ကို follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်…. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ …
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒလန် ရန်အောင် ဖမ်းဆီးခံရ
~ ~ ~ ~ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒလန် ရန်အောင် ဖမ်းဆီးခံရ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ VDOမအလဘအာဏာပြန်လွှဲ့လိုက်ပြီ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ကိုမင်းမော်ကွန်းကို မိသွားပြီတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတာ ဝိုင်းရိုက်နေကြတာ သနားပါတယ်
ကိုမင်းမော်ကွန်းကို မိသွားပြီတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတာ ဝိုင်းရိုက်နေကြတာ သနားပါတယ် ~ ~ ~ ~ ကိုမင်းမော်ကွန်းကို မိသွားပြီတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတာ ဝိုင်းရိုက်နေကြတာ သနားပါတယ် ~ ~ ~ ~ ကိုမင်းမော်ကွန်းကို မိသွားပြီတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတာ ဝိုင်းရိုက်နေကြတာ သနားပါတယ် ~ ~ …
by User 01 February 22, 2022 February 22, 2022 0
နာမည္ႀကီးေနသည့္မင္းသမီးယဥ္လတ္ကိုစစ္ဗိုလ္မ်ားကဝိုင္းလိုးသည့္ဗီဒီယိုဖိုင္ ~ ~ ~ ~ နာမည္ႀကီးေနသည့္မင္းသမီးယဥ္လတ္ကိုစစ္ဗိုလ္မ်ားကဝိုင္းလိုးသည့္ဗီဒီယိုဖိုင္ ~ ~ ~ ~ နာမည္ႀကီးေနသည့္မင္းသမီးယဥ္လတ္ကိုစစ္ဗိုလ္မ်ားကဝိုင္းလိုးသည့္ဗီဒီယိုဖိုင္ ~ ~ ~ ~
ဇေကမ္ဘာမိသားစုပိုင်နေအိမ်တွေကို စစ်ကောင်စီက စတင်ချိတ်ပိတ်နေပါပြီ (Burma Radio On Air)
ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ချယ်ရီထက် ရယ်။ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး ချယ်ရီထက် ရယ်
Copyright © 2022 24hourspress. Powered by WordPress and Bam.